Hihaona amin'ny Ulefone Power 5, finday misy bateria 13000mAh goavana | Androidsis
Ulefone dia orinasa sinoa iray efa ho 20 taona eo amin'ny sehatry ny telefaona izay miseho, indraindray, miaraka amin'ny fitaovana vaovao tsy misy fampisehoana tsy azo resahina. Ity orinasa ity dia miavaka, mihoatra ny zava-drehetra, amin'ny tahan'ny kalitao / vidiny tsara amin'ireo fitaovana ao aminy, ireo finday izay manana laza tsara eo amin'ny tsena eoropeanina koa noho ny volavola noforoniny sy kanto.
Amin'ity fotoana ity dia mitondra antsika ny orinasa aziatika Ulefone Power 5, finday avo lenta tsara, mahery, ary tena niasa izay manana batterie lehibe, tsy misy mihoatra ary tsy latsa-danja, 13.000mAh. Tohizo ny famakiana!
Ny Ulefone Power 5 dia miaraka amina efijery FullHD + 6-inch goavam-be miaraka amina vahaolana 2.160 x 1.080 teboka mifototra amin'ny tahan'ny endrika 18: 9 malefaka sy mahazo aina. izay manamora kokoa ny fihazonantsika na eo aza ny haben'ny tontonana. Inona koa, ao anatiny dia mitondra processeur Mediatek MT6763 valo-mahery matanjaka afaka mahatratra ny refin'ny famantaranandro 2.0GHz, fahatsiarovana RAM 6GB, habaka fitahirizana anatiny 64GB azo velarina amin'ny microSD hatramin'ny 256GB, ary, amin'ny maha-lohalaharana azy, bateria 13.000mAh miaraka amin'ny Super Fast Charge 5V / 5A fiampangana haingana afaka mameno tanteraka ny fitaovana ao anatin'ny 2.5 ora, ary fanohanana ny famahanana tsy misy tariby 10W.
Amin'ny lafiny iray, Izy io dia mitondra sensor 230MP + 21MP Sony IMX5 aoriana miaraka amin'i OIS, Auto-HDR, vavahady f / 1.8 ary flash LED roa, ary sensor 8MP eo anoloana roa hafa (mifangaro hatramin'ny 13MP) + 5MP miaraka amin'ny f / 2.2. Ary koa mihazakazaka Android 8.1 Oreo Amin'ny maha rafitra fiasan'ny orinasa azy dia manana teknolojia fankasitrahana ny tarehy izy io Face ID, mpamaky rantsan-tànana amin'ny ilany ankavanana, ary, raha ny refy sy ny lanjany dia mirefy 169.4 x 80.2 x 15.8mm ary milanja 330 grama.
Ny vidiny sy ny fisian'ny Ulefone Power 5
Ny Ulefone Power 5 dia ho azo amidy mialoha ny 24 aprily ho avy izao amin'ny vidiny mbola tsy nohazavaina.
Raha mila fampahalalana bebe kokoa amin'ity finday ity dia tsidiho ny Tranonkala ofisialy Ulefone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Hihaona amin'ny Ulefone Power 5, finday misy bateria 13000mAh goavambe
Manolotra fihenam-bidy 60% mandritra ny eBay Super Weekend
Nubia Red Magic: Ilay smartphone finday vaovao eny an-tsena